Ny fijoroana vavaolombelona nataon’i Vavy Elyssa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny fijoroana vavaolombelona nataon’i Vavy Elyssa
Nifarana ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto amintsika sy teo amin’ireo firenena roa dia i Mozambika sy i Maorisy. Maro ireo lahateny nataony sy nataon’ireo nisolontena isan’ambaratonga (Kardinaly, Evekan’ny Tanora, tanora…). Indro ampitaintsika eto isan’andro ny dikateny izay niantsorohan’i Mompera Marcel Ranivomanalina. Mpandikateny nahazo fankasitrahana feno avy amin’ny Papa Ray Masina. Lahateny 13 no havoaka eto.
Vavy Elyssa Nekendraza, tanora vavy 21 taona avy ao amin’ny diosezin’i Maintirano no nisolotena an’ireo tanora vavy nandritra ny fiaretan-tory teny Soamandrakizay ary nitondra ny tenin’ireo tanora nitafa mivantana tamin’ny Papa Fransoa ny 7 septambra 2019.
“Izaho dia teraka tamin’ny 26 Jiona 1998 tao Ambiky, Commune Berevo. Zanak’i Laurent Vanombelona sy i Séraphine. Avy amin’ny foko Tsimihety ny raiko, ary ny reniko avy amin’ny foko Sakalava. Mpamboly sy mpiompy ireo ray aman-dreniko. Dimy izahay no zanak’izy ireo : iray lahy ary efatra vavy.
Niteraka olana maro tao amin’ny fiainan’ny fianakavianay ny fifangaroan’ireo foko roa ireo, satria samy manana ny fomba amam-panaony ny foko tsirairay ary samy te-hampanjaka ny azy. Kanefa noho ireo ray aman-dreniko tena nifankatia sy noho ny fananan’izy ireo toe-tsaina tompon’andraikitra, dia vitan’izy ireo ny nandresy ireo sedra ary nitondra fiadanana ho anay izany.
Mikasika ny fivavahana, ny nenitoako dia loterana; fa ny ray aman-dreniko kosa dia manahirana ahy ny milaza hoe fivavahana inona no arahin’izy ireo, satria tsy mba hitanay nandeha tany am-piangonana na oviana na oviana izany izy ireo. Nianatra ny katesizy tao amin’ny sekoly loterana izahay ka indray andro, nilaza taminay ny nenitoanay fa hatao batemy izahay. Nanaiky ny reniko. Ny raiko tsy niteny tsy nivolana. Dia niomana àry izahay ka tamin’ny taona 2017 no nandraisanay ny batemy tao amin’ny Eglizy katolikan’Ambiky, noho ny fanapahan-kevitry ny raiko. Tamin’izay no nahitako farany ireo ray aman-dreniko tao am-piangonana.
Fa izahay irery foana, izahay mirahavavy, no nandeha nivavaka tany am-piangonana ny alahady. Nanao komonio voalohany izahay tamin’ny taona 2011. Ny tena nahafaly anay dia ireo ray aman-dreninay nampitondra anay ireo vokatry ny tany hatao fanatitra tamin’ny fankalazana fety iray, ary raha tsy nisy ireo fanatitra dia vola no nampitondrain’izy ireo.
Ka na tojo fahasahiranana izahay, i papa sy mama dia niezaka ny hamelona anay toy ny olon-drehetra ary nanao izay tsy hampiafy anay. Tamin’ny taona 2013 dia nifindra tao Maintirano izaho sy ireo rahavaviko mba hanohy ny fianarana amin’ny ambaratonga faharoa. Notohizinay ny fianarana ny katesizy ary nihamafy ny fitiavanay ny vavaka.
Rehefa nilaza taminay i Mompera curé fa alohan’ny handraisana ny sakramentan’ny Fankaherezana dia tsara ho an’ireo tanora ny misoratra anarana amin’izay fikambanana misy ao am-piangonana, dia nanontany tena izahay hoe fikambanana inona moa no tokony hidiranay. Nanao izay hahafantarana ireo fikambanana misy ao am-piangonana izahay ka ny giropy fransiskana no nahasarika anay noho ny tantarany sy ny fiainam-panahiny ary dia niditra ho mpikambana tao izahay.
Maniry ny ho tonga dokotera aho mba ahafahako manampy ny hafa sy manao soa ho azy ireo. Fa izany anefa dia miankina amin’izay enti-manan’ireo ray aman-dreniko. Tsy mitsahatra ny mivavaka ho azy ireo aho, indrindra mba hahafantarako indray andro izay fonosin’ny mistery miafina ao ambadiky ny fihetsik’izy ireo: izany hoe, tian’izy ireo ny vavaka ary ampianarin’izy ireo izahay ho tia vavaka, kanefa tsy mankany am-piangonana na oviana na oviana izy ireo.
Misaotra anao aho, ry Ray Masina, nihaino ahy. Misaotra ihany koa amin’ireo hafatra itaomanao ireo tanora mba hanaja ireo ray aman-dreny ary hjery ny lafy tsaran’ny fiainana ka hahay hanovo lesona amin’izany.”
6- Ny fijoroana vavolombelona nataon'i Rova Sitraka nandritra ny fiaretan-tory teny Soamandrakizay niaraka tamin'ny Papa Fransoa : https://www.lakroa.mg/item-1903_articles_dossier_18-ny-fijoroana-vavolombelona-nataonai-rova-sitraka.html